Taratasy ho Citizen Buba: Dousing fihetsika herinaratra Pricing
Posted by: Anie Anokuru March 29, 2014
Araka ny taratasy tamin'ny Society vao haingana naka lafiny mampivarahontsana ao Nizeria, dia mety tsy ho amin'ny toerana ity zava-manitra ny fironana amin'ny fampidirana ny ahy - Fa ny fihinanana ny mahazatra Nizeriana. Ny Nizeriana mpanjifa herinaratra no hitiavan'ny mpandray ny taratasy misokatra, araka ny epitomized amin'ny Citizen Buba, izay niahiahy ankehitriny (miaraka amin'ny olona an-tapitrisa ny karazana) ny tsarotra Pricing ny herinaratra hery any Nizeria lahatsoratr'i-miankina vanim-potoana.
Io lahatsoratra io dia mikendry ny fanehoan-kevitra sarotra aza dousing azo inoana fa manodidina, ary hanala ny kiran'ny hazandrano amin'ny Citizen be ny masony Buba.
Aho voatery hampihatra ny famaritana anaram-boninahitra, "Citizen", to your name due to the realisation that your expectations of what happens to pricing or rates of electricity supply is a pure reflection of those being harboured by millions of other electricity consumers in Nigeria. Raha lazaina amin'ny fomba hafa, ianao hampisehoana ny mahazatra olom-pirenena Nizeriana, amin'ny nanangana ny volomaso ary manomboka mampiseho mazava fiandrasana ny amin'izay ho hitranga momba ny taha tokony haloa ho an'ny herinaratra, amin'izao fotoana izao fa mihazakazaka manokana Ventures efa naka ny fananan'ny ho an'ny taranaka sy ny fizarana ny herinaratra hery, noho ny tsy miankina vao haingana nifarana ny hery sehatra.
Tsy avy amin'ny toerana mba manantena hamaly-bahoaka ny misy fiakaran'ny tahan'ny ofisialy ny herinaratra amin'ny mpanjifa. Izany no antony ity taratasy ity dia mivantana any aminao, toy ny fanazavana fanampiny momba ny alehany-on dia azo antoka fa hanao ny fahalalana-bahoaka, ary taorian'izay douse tsarotra misy fanehoan-kevitra-bahoaka. Ny maha-Nizeriana mpanjifa ny tenako, Ihany aho nahatsiaro ny fanontaniana mety maka endrika ao an-tsainao ho toy ianareo eo amin 'ity taratasy.
Ny iray dia tsy voatery ho clairvoyant hanao fa manana fanontaniana ireo ao an-tsaina: (ny) Dia ny tsy miankina vao haingana vokatry nifarana amin'ny tahan'ny fitomboana? (amin ') Raha eny, inona no ho toy izany ny antony? (d) Inona no azo atao momba ny mitigating ny fiantraikany eo amin'ny ratepayers, raha mitombo ny tahan'ny mitranga? Alohan'ny niresaka ireo fanontaniana ireo, Tiako ny manamarika izay ny Nizeriana ankehitriny mpanjifa no nitaraina momba (noho izany misy famantarana ny vidiny tsy tiako maizina àry mahatonga fitomboana), ny alalan 'ny fahazavana manipy maro ny zavatra ahazoan'ny ankehitriny mikasika ny zavatra vaovao io mba mitazona ho antsika, mpanjifa.
Voangorin'i, Manantena aho fa fantatrareo fa somary sarotra mangataka ny olona mba handoa ny vokatra izay ambanin'ny-namatsy, toy ny herinaratra ny fahefana amin'izao fotoana izao? Tsy misy vaovao intsony ny ankamaroan'ny tokantrano sy ny raharaham-barotra Nizeriana establishments dia amboakely ny herinaratra. Ny mahazatra mpanjifa Nizeriana ao amin'ny herinaratra ny hery tsena, toy ny amin'ny hafa climes, manana olana fototra roa izay tena fototra, ary nomena mba ny laharam-pahamehana – Fiarovana ny famatsiana, sy ny vidiny. Isika miatrika ny farany eto, ho toy ny anaram-boninahitra teo aloha tao amin'ny andian-dahatsoratra ity dia miresaka ny olana amin'ny famatsiana raha expatiating amin'ny tambajotra fizarana fahefana toetra.
Alohan'ny mikaroka ny hoe, inona no mihazona ankehitriny ao anatin'ny filaminana ny vaovao, masìna ianao, aza atao izany amiko ianao raha mandona ny mahatsiaro fa, "Ny fanontaniana rehetra, misy ambony sy lalina kokoa valiny iray ". Ny valiny lalina kokoa ny fanontaniana momba Pricing no tena mahaforona ireo taha na fiampangana izay mampiseho amin'ny herinaratra isam-bolana billing. Voangorin'i, Aza hadinoina izany – Ny volavolan-dalàna isam-bolana (izay volavolan-dalàna dia ny fihinanana ny herinaratra hery na ny herinaratra) dia ahitana fizarana roa:
(ny) Fiampangana (tagged angovo matetika anjara-raharaha) mifototra amin'ny angovo herinaratra (amin'ny kilowatt-ora, na kWh) azon'ny tokantrano na raharaham-barotra mandritra ny volana. Izany dia ahitana ny anjara-raharaha niaraka tamin'ny famokarana herinaratra (niteraka ny herinaratra); ny anjara-raharaha ny miasa sy ny fitazonana ny herinaratra rafitra fifindran'ny (hamindra izany amin'ny alalan'ny Grid); Mampianiana fa mampihetsi-po ny fizarana ny herinaratra andalana ho ao an-tranonao, na raharaham-barotra (nizara izany ao amin'ny faritra misy); sy ny fizotry ny fitantanana ny varotra (vola ho lany amin'ny fitantanana ny fivarotana azy io ho anao).
(amin ') Ny herinaratra kely Levy (matetika antsoina hoe raikitra fiampangana isam-bolana, fiampangana na ny fanompoana fanompoana saram-). Izany ampahany caters ny billing, metatra famakiana, antso fanompoana valin-, tsipika fanompoana fikojakojana sy ny fametrahana fitaovana vaovao.
Citizen Buba, manamarika fa ao amin'ny toe-javatra izay tsy manapa-kevitra na dia lanin'ny kWh iray ao an-tokantranonao, na raharaham-barotra mandritra ny volana anatin, (ny) ambony mamaky aotra, raha (amin '), ny fanompoana izany fiampangana volana, araka ny nosoratan'i ny sokajy mpanjifa, sisa tavela no voalaza manohitra ny tantara. Nizeriana dia tsy maintsy mitondra ao an-tsaina foana fa ny hevitry ny Service ny andraikitsika ao amin'ny billing dingana tsy azo ampiharina eto ihany (Tsy nisy 'zavatra Nizeriana'), fa ahazoan'ny any amin'ny faritra hafa eto amin'izao tontolo izao. Masìna ianao, mba hanamarinana izany hanafaka. Ny fandehanana an-toerana amin'ny alalan'ny parlance, fanompoana fiampangana dia "azo antoka mpiasan'ny banky".
Eo na ny tsy miankina ny sehatry ny hery nahatonga Na ahoana na ahoana, na raha tsy izany nitombo, ny valiny 'Eny'. Dia nanao, fa marginally. Ny tsy miankina niantso ny fampidirana ny fitondrana Pricing tagged Multi Year Tariff Order (PEAZY), nametraka ny Nizeriana Commission na didy amam-pitsipika herinaratra NERC. Izany no natao mba hanosika tapa-kevitra ny vidin'ny herinaratra lafo ny fizarana (ary ny antsinjarany) orinasa avy Jona 1, 2012 ny May 31, 2017. Raha tsorina,, tsy MYTO mpampiasa vola mety ho nanome malalaka ny fampiasam-bola berth amin'ity sehatra ity, ary ny fanatanjahan-tena tsy miankina dia efa flop, toy ny ambany Pricing dia tsy ho nanaiky ny mpampiasa vola vidiny fanarenana. Kokoa, Voangorin'i, Mamporisika anareo aho mba hitsidika ny tranonkala NERC toerana. (Mbola hitohy)
1 Comment amin'ny "Taratasy ho Citizen Buba: Dousing fihetsika herinaratra Pricing"
jovie | Jona 9, 2014 amin'ny 2:18 PM | navalin'i